China Weather Proof Light / Vandal-Proof Light Slim mpanamboatra sy mpamatsy | P&Q
Vatan-kafatra maty, Hummer Slim LED PRO Robina milina maharitra azo iainana mba hiaretana ny tontolo iainana manimba na manimba.
Ny tontolon'ny toetr'andro Hummer izay namboarina sy tafavory dia manana tantara voaporofo sy atokisana fa sarotra ho an'ny ambaratonga rehetra amin'ny indostria sy ny faritra ampidirina ao anatin'izany ny fitaovam-pitaterana, ny sekoly, ny indostrian'ny mavesatra ary ny faritra manimba be. Ny fitaovana fanaraha-maso dia nohavaozina mba ho notsorina, tena mandaitra ary mahomby amin'ny Lumen Select Technology,
Hummer Slim- Vandalovana luminaire LED mahatohitra
Hummer Slim LED miaraka amina solomaso mihelina maty maty LM6 vita amin'ny vatana aluminium.
Endrika roa 32W 600mm sy 54W 1200mm lava
Vatana alimina an-dranomasina maridrefy fanerena miaraka amina loko vita amin'ny vovoka
Gasket EPDM soloina azo soloina dia manome antoka ny isa IP66 avo
Ny masolavitra polycarbonate matanjaka matanjaka dia manohitra ny fiatraikany & fanararaotana
Misy ihany koa ny kinova vonjy maika ho an'ny safidinao
Fitaovana fanitsiana, lampihazo misy lalamby, tonelina, lavaka fikojakojana, sekoly, fampitaovana ho an'ny daholobe, tokotanin'ny fitaterana, toeram-piantsonan'ny fiara, fonja, sns.
Azonao atao ny manamarina ny porofo manimbaandrana amin'ny tsindrio ity horonantsary manaraka ity
Ny batter tsy azo ravana indrindra luminaire misy eny an-tsena.
Natao manokana ho an'ny toe-javatra henjana eo amin'ny sehatry ny indostria, ny Hummer Slim dia vonona ny hahatanty izay loza ateraky ny tranokala. Ity famafana matanjaka ity dia misy andiam-porofo manara-penitra 6000 vita amin'ny vovoka vita amin'ny vovo, teknolojia enti-polyurethane encapsulation, fiarovana ny firongatry ny fidirana an-tsehatra feno ary isa ambony IP66 sy IK10. Fiantraikany mahery vaika, fidirana anaty rano / vovoka, hafanana mafana ary bibikely - tsy misy hahasakana ny fahombiazan'ny Hummer Slim.
Hummer Slim dia afaka manome tanjaka miavaka amin'ny 54W amin'ny herinaratra fidirana 230VAC, ny Hummer dia manome hazavana avo lenta tsy tapaka, fanjifana angovo mahomby, Index Rendering miloko avo lenta ary tsy misy fiatraikany stroboscopic.
Ny Hummer Slim dia tsy miaina mifanaraka amin'ny lova luminaire batterie P&Q LED– manoatra azy io.
Teo aloha: Jiro mpampita ahy
Manaraka: Fahazavana manaporofo ny toetr'andro / hazavana manimba-porofo
Fahazavana eny amin'ny fiantsonan'ny fiara
Die Casting Aluminium Jiro
Maty hazavana amin'ny valin-drihana
Mpanamboatra ampahany amin'ny jiro
Jiro taratra tsy misy toetr'andro
Jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro
Maty jiro alim-baravarankely